समाचार - बीयरि withमा के गलत छ? यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
बीयरि withमा के गलत छ? यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
क्रसरको खदान उत्पादनमा, अक्सर हतियार बोराउने पकड हुन्छ, त्यो हथौरा पनी होल्ड भनेको के हो?
तथाकथित बियरिंग लक, एक ठूलो मात्रामा तातो चालु गर्ने प्रक्रियामा असर हो, छोटो समयमा गर्मी फैलाउन सकिँदैन। असर तापमान तीव्र रूपमा बढ्नको लागि, अन्ततः असर लक हुनेछ। यो घटना सामान्य छ। उपकरण ओभरहाल र उत्पादन सेवा साइटहरूमा,
असर लक गर्ने का खास कारणहरू निम्नानुसार छन्:
| को अनुचित सभा
01 | सम्मेलनको समयमा शाफ्टको साथ असर सिट होल वा असरको भित्री औंठीको साथ असरको बाहिरी औंठीको अनुचित फिटिंग।
असेंबलीको प्रक्रियामा, कहिलेकाँही भित्री प्वाल पलिश्ड हुँदैन र यसको आकार नाप्यो। असरलाई सम्मेलनको लागि प्रतिस्थापन गरिएको थियो, र टेस्ट रन पछि तापमान वृद्धि धेरै उच्च पाए। विघटन परीक्षणको क्रममा, यो पत्ता लाग्यो कि असर सिट होल विकृत भएको थियो, जसले असरको बाहिरी औंठी निचोरेको थियो। , असरको सानो रेडियल क्लियरन्स, रोलि body शरीरको असमान रोटेशन, र बढेको परिमाणको परिणामस्वरूप। यदि असरको भित्री औंठी र शाफ्ट बीचमा क्लियरेन्स धेरै ठूलो छ भने, असरको भित्री रिंग रोलिंग शरीरसँग घुमाउनेछ। र शाफ्ट र फ्रिक्शनले असरलाई तातो पार्छ र भाइब्रेट गर्दछ। २) असर गर्ने हिटि temperature टेम्प्चिंगको समयमा अनुचित नियन्त्रण। यदि बेयरि he हीटरको तापक्रम ताप को सञ्चालनको क्रममा धेरै नै छ भने, यसले थकाउको कारण बनाउछ र कठोरता कम गर्दछ। र सटीकता, ताकि असर तापमान बढ्न सक्छ, अधिक लगाउने र बेयरिंग damage को क्षति निम्त्याउने) असेंबलीको समयमा असर क्लियरन्सको अनुचित समायोजन। व्यावहारिक कार्यमा, धेरै स्थापनाहरू केहि हुन् समय केवल हातले समायोजित गर्दछ, र क्लियरेन्स उत्पादन आवश्यकताहरू पूरा गर्न निकै ठूलो वा धेरै सानो हुन्छ। यदि अक्षीय क्लियरेन्स धेरै सानो छ भने यसले सजीलो असर तताउने काम गर्दछ, पिट्टि cor क्षीकरणको गति बढाउने छ, र रोलिंग शरीरलाई पक्रिएको वा चिप्लिएको क्षति पनि निम्त्याउनेछ; यदि अक्षीय क्लियरेन्स धेरै ठूलो छ भने, गति जोडीको प्रभाव बल बढ्छ र कठोरता घट्छ, असामान्य आवाज अपरेशनमा उत्पन्न हुन्छ, र गम्भीर कम्पन वा पिंजरेमा हुने क्षति पनि।
तेल मोहरलाई सीलिंग कम्पोनेन्टको साथ मेकानिकल उपकरणमा घुमाउने शाफ्टलाई सील गर्न प्रयोग गरिन्छ, र गुहा मूल रूपमा स्थिर छ, त्यसैले तेल मोहरलाई पनि घुमाउने शाफ्ट लिप सिलि ring रि ring भनेर चिनिन्छ। तेल मोहर जुन ओठको जोडी लिन्छ, यसको जोडी ओठ डस्टप्रूफ कार्य बढ्छ, अशुद्धतालाई आक्रमण गर्न रोक्छ, तेल सील जीवनलाई लामो बनाउनको लागि, तर ओठ स्थानको जोडी अक्सर खराब स्नेहन गर्दछ, घर्षण बल ठूलो हुन्छ, तेललाई सुख्खा घर्षण र क्षतिलाई सील गर्न लगाउँछ, जब डबल लिपको तेल सील स्थापना हुन्छ, तो डबल ओठको बीचमा ग्रीस भर्नुहोस्।
03 | खाली समस्या
असेंब्ली प्रक्रियामा, यदि तपाईले कम्पार्टमेन्टको आकार, एसेम्ब्ली टेस्टलाई ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुभएन भने निश्चित अवधि पछि तापक्रम द्रुत गतिमा बढ्नेछ। असरको बाहिरी औंठीको आकार अन्त कभर द्वारा निर्धारित गरिएको छ र असर सिट चेक, स्पेसरको आकार घटाइएको छ, भित्री औंठीको आकार गोलाकार नटद्वारा समायोजित हुनेछ, र अन्तमा संकुचित हुन्छ, असरको अक्षीय क्लियरेंस सानो हुन्छ, यो अपरेसनको बेलामा तातो बनाउँछ।
04 | लुब्रिकेशन समस्या
ग्रीस बियरिंग गर्न धेरै हुँदैन, ग्रीस रकम एकदम ठूलो छ, घर्षण टोक़ बढाउनेछ, असर तापमानमा वृद्धि हुन्छ; यदि फ्याटको मात्रा धेरै कम छ भने, विश्वसनीय स्नेह प्राप्त गर्न सकिदैन र सुख्खा घर्षण हुन्छ। सामान्यतया बोल्दा, उचित मात्रा ग्रीस को १/3 ~ १/२ असर मा कुल शून्य मात्रा को। तसर्थ, तेलको उचित मात्रा अपरेसन आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा इन्जेक्सन गर्नुपर्छ